Shirkii Nairobi ma waxa uu ahaa Toosin mise Dumin Dowladda ah ? – Kalfadhi
Shirkii Nairobi ma waxa uu ahaa Toosin mise Dumin Dowladda ah ?
Shalay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaa ka dhacay shirkii ugu waynaa oo ay mucaaradka yeeshaan sanadihii ugu dambeeyay waxaana isugu tagay Xildhibaano, Wasiiro hore, hogaamiyaal Xisbi iyo siyaasiin kale oo mug iyo miisaan culus ku leh Siyaasadda Soomaaliya.
Shirkaan ayaa socday 24 saac kabadan waxaana markii uu dhamaaday laga soo saaray qodobo dhamaantood muujinaya walaac iyo rajo la’aan iyadoo gaba-gabadiina la soo jeediyay 3 qodob oo baaq ah.
Xubnaha shirka ka qayb galay ayaa xoogga saaray Amniga, Dastuurka, Doorashooyiinka iyo Talawdaag ku saabsan arimaha Siyaasadda ee Dowladda dhexe iyo maamul Gobaleedyada dalka iyo wadahadalka Soomaaliland.
Qodobada amniga iyo dastuurka ayey sheegayn in lagu fashimay oo aan waxba laga qaban labadii Sano ee la soo dhaafay halka ay rajo xumo ka muujiyeen in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Waxay ku taliyeen Wadahadal lala furo Maamul Gobaleedyada lana dejiyo siyaasadda sii xumaaneysa ee Maamul Gobaleedyada iyo Dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Xildhibaan Axmed Macalim Fiqi oo kamid ah Xubnaha Shirka ka qayb galay ayaa sheegay in loo baahan yahay in la badalo Xukuumadda lana dhiso Xukuumad cusub hadii ay dhici waysana la qaban doono Shirwayne Qaran oo looga hadlayo arimaha Soomaaliya. “Shirwayne Qaran ayaa qaban doonaa bisha June hadii la diidana meel dalka kamid ah ayaa ku qaban doonaa” ayuu yiri Xildhibaan Fiqi.
Xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil Daahir oo Golaha Shacabka katirsan ayaa qaba Baaqa shirka ka soo baxay in uu yahay mid saxan islamarkaana uu taageersan yahay kaas oo ah in la badalo Xukuumadda sida ugu dhaqsiyaha badan.
“Waan la qabaa baaqa ah in Xukuumadda la badalo iyo in dowladda ku fashilantay dhamaan wixii aan u idmanay” ayuu yiri Xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil Daahir.
Dhinaca kale Dowladda Soomaaliya ayaa ka jawaabtay Natiijada ka soo baxday Shirkii shalay ku soo dhamaaday dalka Kenya. Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Sheekh Daahir Maxamuud Geelle ayaa ka hadlay Shirkaasi xalay waxa uuna ku baaqay in aad xaaladda la sii fogaynin.
“Siyaasiyiinta waa saamiley waa dad waxaan heyna wax ku leh oo nala leh oo yeelan jiray oo yeelan kara berri in maamulka nagu xumaado ma ahan, dowladda waxay wadaa hannaan isku raadin ah meesha aad noo maleysaan ma jirno in la isu yimaada rabnaa, baabuurka yaan xawaaraha laga badin”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta oo xalay ka hadlayay Munaasabad ka dhacday Muqdisho.
Wasiir ku xigeenkii hore ee Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya hadana la taliye arimaha Siyaasadda ee Madaxweynaha Soomaaliya Salaad Cali Jeelle ayaa wareysi siiyay Kalfadhi ayaa sheegay in shirkaasi uu ahaa mid lagu duminayo Dowladda Soomaaliya balse uusan aheyn mid talo soo jeedin ah ama wax dhisid ah.
“Shirkii Nairobi waxa uu ahaa mid lagu duminayo Dowladda waxaana soo abaabulay mucaarad qaran dumis ah oo dano gaar ah wata” ayuu Kalfadhi u sheegay Salaad Cali Jeelle oo kamid ah siyaasiinta Soomaaliyeed.
“Hadii wax dhisayaan maxey Muqdisho ugu shiri waayeen, maxaa dhamaantood mucaarad ka dhigay maxeey u sheegi waayeen guulaha la gaaray” ayuu yiri Salaad Cali Jeelle oo wareysi siiyay Kalfadhi.
Siyaasiin badan iyo aqoonyahaano ayaa ku kala aragti duwan Shirkii ka dhacay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. In badan oo kamid ah Siyaasiinta ayaa qaba in Shirka lagu soo bandhigay waxyaabo badan oo xaqaa’iq ah balse ay aheyd in dalka lagu qabto halka qaar kalane ay ku tilmaameen in shirka uu ahaa mid lagu duminayo Dowladda oo aan marna looga hadlin Arimaha danta guud.
Olalaha soo xulista Baarlamaanka Galmudug oo ka socda degaanada Maamulkaasi